Netflix ကသိပ္ပံဇာတ်ကားကောင်းကြိုက်သူတွေအတွက် TAU လာပြီ... - MoviesFan Movie News
ဇာတ်လမ်းရဲ့ပုံစံက အဲလစ်ဆိုသူဟာ ကမ္ဘာကြီးကို ချုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့အတွက် လူတွေအစား စက်တွေ နည်းပညာတွေနဲ့ အိမ်ကနေ တစ်ယောက်တည်း ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် ဖမ်းစီးထားတဲ့ လူ ၃ဦးရှိပြီး ၂ဦးကတော့ ထွက်ပြေးရင်း မလွတ်မြောက်နိုင်ဘဲ သေခဲ့ကြရပါတယ်။ ကောင်မလေးတစ်ဦးကတော့ မလွတ်မြောက်နိုင်ဘဲ ကျန်ရှိနေခဲ့ပြီးး အဲလစ်က ထိန်းချုပ်ထားပြန်ပါတယ်။ အဲလစ်ရဲ့ အိမ်ကြီးတစ်ခုလုံးကို ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ နည်းပညာစက်ကြီးမှာတော့ လူတွေလိုဘဲ အသိဉာဏ်ထည့်ထားတဲ့ TAU လို့အမည်ရတဲ့ စက်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။ သူကတော့ အဲလစ်ရဲ့ အစေခံဆိုလည်း ဟုတ်ပါတယ်။ အိမ်သန့်ရှင်းရေးတွေလည်း လုပ်တယ်။ လူတွေလည်း သတ်တယ်။ ထိန်းချုပ်ဖမ်းဆီးနိုင်တယ်။ နောက်ဆုံး အဲလစ်မရှိတဲ့အချိန်တွေမှာ မသေဘဲကျန်နေတဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ TAU တို့ မိတ်ဆွေတွေဖြစ်သွားပြီး ဘာတွေဆက်ဖြစ်သွားမလဲ ဆိုတာကိုတော့ ဆက်လက်ကြည့်ရှု့ပေးဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာ သဲထိတ်ရင်ဖိုဇာတ်ကားလေးမို့ မပျင်းရမှာလည်း သေချာပါတယ်။ တကယ်ကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားလေးဖြစ်လို့ ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်ဖို့ဘဲ ပြောလိုက်ချင်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ….
Previous Post: အပြောင်းအလဲလေးဖြစ်အောင် လူတွေရဲ့ ဦးနှောက်ကို Hack ကြည့်ကြမယ်….
Next Post: ၂၀၁၈ ခုနှစ် Emmy ဆုပေးပွဲအတွက် ဇကာတင်စာရင်းမှာ ပါ၀င်လာခဲ့တဲ့ Sandra Oh